Archive du 20200427
Praiminisitra Ntsay Christian Nakisaka an-tsisy tosy sa tsy te haloto ?
Zara raha hita ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Ntsay Christian tato anatin’ny raharaha Coronavirus. Takona tanteraka ary tsy dia misy fampitam-baovao firy momba azy sy izay ataony, raha toa ka saika isan’andro no
Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena Nizara arotava niisa 20.000
Ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena dia nahatanteraka ny fanentanana sy ny fizarana ny arotava ho fiarovana amin'ny aretina Covid-19 tamin’ny zoma 24 aprily lasa teo.
Fanarenana ny toekarena Mihazakazaka ny firenena manankarena
Tsy misy resabe fa asa avy hatrany no tanterahin’ireo firenena manankarena voakasiky ny aretina coronavirus. Sina,
Fampandrian-tany tany Ambanja Polisy iray no namoy ny ainy
Polisy iray no namoy ny ainy tany Antsifatra Analabe, distrikan’Ambanja taorian’ny ratra mafy nahazo azy nandritra ny hetsika fampandrian-tany nataony.
Korea Avaratra Tsy hay na maty na velona I Kim Jung-Un
Miely amin’ny haino amanjery maro any ivelany ny resabe momba toe-pahasalaman’i Kim Jong-Un (36 taona), mpitondra an’i Korea Avaratra, nandova Fanjakana tamin’ny Rainy sy Raibeny.
Jiro sy ranon'Antananarivo Manomboka tapaka matetika
Maty manomboka tamin'ny 7 ora maraina ny jiro tamina faritra maro teto an-drenivohitra sy ny manodidina omaly alahady ary tsy niverina raha tsy tamin ny 5ora 30 hariva toy ny teny Anosipatrana.
Fiantraikan’ny Covid Organics Renim-pianakaviana iray nitantara ny nanjo azy
Renim-pianakaviana iray no nanao fanehoan-kevitra karazana fanairana ho an’ny siantifika sy ny mpitsabo ary manampahaizana taorian’ny fisotroany ilay tambavy covid organics. Rehefa avy nisotro ilay CVO ny tenako dia izao no
Tence Mena "Négatif" ny valin'ny fitiliana...
36 taty aorian'ny nidirany hopitaly teny Anosiala - Ambohidratrimo, milaza fa efa tena reraka i Tence Mena.
Sénégal Tsy mbola nikaomandy Covid Organics izany !
Nambaran’ny Filoha Rajoelina ny faran’ny herinandro teo fa niarahaba an’i Madagasikara tamin’ny fahitana ilay tambavy Covid organics ny firenena Sénégalais tamin’ny alalan’ny Filohany Macky Sall.
Tsy fitondrana arotava Mety ho maro ireo voasazy…
Anio alatsinainy 27 aprily no voafaritra fa tsy maintsy hitondran’ny olom-pirenena rehetra tsy an-kanavaka arotava raha ny toromarika avy amin’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina.
Covid organics Voafetra ireo olona mampiasa azy
Manamafy ny fiarovana vatana, miaro amin` ny tsimok` aretina, miaro amin`ny tazo sy aretin` ny havokavoka sy ny fahasemporana. Ireo no tombony amin` ny fisotroana ny tambavy Covid Organics (CVO).
Prefen'Antananarivo Manahy ny hipariahan'ny covid-19 any am-piangonana
Tsy misy mahazo misokatra ny fiangonana FJKM tsy naka alalana manokana amin’ny Prefektioran’Antananarivo, hoy ny Prefe Jeneraly Ravelonarivo Angelo Christian ny sabotsy teo.
Tambavy Covid Organics Vita Malagasy tokoa ve ?
Maro ny adihevitra mahakasika ny tambavy Covid Organics amin` izao fotoana izao. Manasitrana sa miaro fotsiny? Eken` ny OMS sa tsia? Ny ankizy Malagasy no atao sorona amin` izao…
Famokarana ny Covid Organics Tena misy resaka tsy mazava…
Tsy fanakianana na fanaratsiana be fahatany ny covid organics ambara fa hitan’ny Sampam-pikarohana Malagasy dia ny IMRA, fa kosa misy toe-javatra manjavozavo ilàna fanazavana.
Tosika Fameno Tokantrano 189 400 hahazo 100 000Ar avy
Natomboka ny sabotsy 25 aprily 2020 teny amin’ny Lisea teknika Alarobia ny fizarana ny vola fanampiana "Tosika Fameno", tohana ara-tsosialy avy amin’ny fanjakana malagasy sy ny Banky Iraisam-pirenena entina hanampiana ireo tokantrano tena sahirana sy marefo.
Fahamehana ara-pahasalamana Mampametra-panontaniana maro
Tsena mora, Vatsy tsinjo, Loharano sy izay hafa efa misy rehetra dia santionany amin’ireo karazana rafitra sy tetikasa sosialy natsangana tato anatin’ity fitondrana ity, indrindra,